Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Fitsaram-bahoaka Ho Fiatrehana Ny Habibian’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2011 22:37 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny tatitray manokana momba ny Revolisiona ao Ejipta 2011. 
Malek Mostafa, Ahmed Abd El-Fatah ary Ahmed Harara dia Ejiptiana telo voatifitra teo amin'ny masony  teo ampanaovana hetsi-panoherana tao amin'ny kianja Tahrir. Harara dia poaka ny masony haiva nandritra ny fihatsiketsehana nantsoina hoe Andrompahatezerana  ony 28 Janoary 2011, nanoherana ny filoha teo aloha Mubarak, ary taty aoriana dia poaka indray ny masony faharoa taorian'ny tifitra nahazo azy nandritra ilay onja faharoan'ny revolisiona  nanoherana ny Filankevitra Ambonin'ny Tafika Mitam-piadiana.
@linawardani : Nandeha namangy an'i Ahmed Harara aho, niteny arahaba aho no sady nanoI said hi and lotra ny tanako, tsy namaly izy, tsy afaka ny hahita ahy satria vaky ny masony iray tamin'ny 28 Jan, ary ny iray tamin'ny 18 nov
Na ireo olon'ny mpitandro filaminan'ity firenena ity izay namono nahafaty na nandratra Ejiptiana an-jatony nandritra ny onja voalohan'ny revolisiona, na ireo izay namerina nanao izany nandritra ny onja faharoa dia samy tsy mbla nisy voasazy. Na izany aza, tato anatin'ny roa andro lasa, ny olona dia nanomboka nizara lahatsary iray mampiseho manampahefan'ny polisy iray mitifitra  [ar] ary olona iray midera azy nahavita nikendry tsara ny mason'ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nanomgoka hatreto dia nifampizara sary mifanosona ny mpiondana aterineto mampiseho ny endrik'ilay manampahefana  ary nanapa-kevitra ny hiroso lalindalina kokoa sy hamoaka ny mombamomba azy
Dikasarin'ny fàfana mampiseho ny endrik'ilay manampahefana. Sary nozarain'i @Sabrology tao amin'ny Twitpic
Taty aoriana kely, ireo mpampiasa Twitter dia nanamafy fa vitan-dry zareo ny namantatra azy [ar]:
@ASU011 : Ilay manampahefana tomponandraikitry ny fitifirana ny mason'olona toy ny hoe manao azy ireny ho lasibatra mihitsy … dia i Lenten Mahmoud Sobhy El-Shennawy. Bitsika naverina nalefa
Ho toy ny làlana hanalàm-baraka ilay nahavanon-doza sy hamantarana azy, ny olona dia nanaparitaka ihany koa taratasy kely  [ar] ary nanao sary graffiti  [ar] eny amin'ireo làlana manodidina  [ar] mikasika ilay manampahefana miaraka amin'ny anarany sy ny heloka vitany misoratra eo ambany, mangataka ny olona hikaroka azy.
Bilaogy iray hafa no namoaka vaovao misimisy kokoa [ar] mikasika ny eritreretina ho adiresy misy azy, ny laharana findainy  [ar] ary ny valisoa omena izay mahavita misambotra azy.
Mifanipaka be ny fomba fijery mikasika izay tokony hatao amin'ilay manampahefana rehefa tratra. Doaa El-Shamy mahita fa ny fampitahioana azy amin'ny fomba tsy misy herisetra no safidy tsara [ar] :
@doaaelshamy : Tsia, tsy handeha hidaroka azy akory isika, andrasantsika eny amin'ny tranony izy mba hikaton-trano ao tahaky ny ondry, mba tsy ho sahy hivoaka sy hihorohoro sao misy olona hamaly faty ka haka aminy koa ny masony. Na izany aza, tsy hanafika ny tranony isika na hanao herisetra.
Manome soso-kevitra i Abdelrahman Ayyash [ar]:
@3yyash : Izaho dia tsy miombon-kevitra amin'ny hamonoana ilay manampahefana antsoina hoe Mahmoud El-Shennawy izay nikendry ny mason'ireo mpanao fihetsiketsehana. Na izany aza, izaho kosa dia miombon-kevitra amin'ny hakàna ny masony amin'ny fomba medikaly ka hamindrana izany amin'i Ahmed Harara.
Nilaza zava-mahatsikaiky momba ny zava-mitranga i Ahmed Fikry [ar]:
@dr_fikry : Aty Ejipta irery: Napetraka ny valisoa ho an'izay mahasambotra manampahefana iray ao amin'ny polisy.
Ny Fikambanana Ejiptiana Mpiaro Zon'Olombelona dia nanapa-kevitra hanenjika araka ny lalàna ilay manampahefana , raha ilay mpampiasa Twitter, @MohHKamel  [ar] kosa mino fa ny fizaràna ny mombamomba ilay manampahefana dia heloka ary tokony hatsahatra.
Ny mpampiasa Twitter sasany dia niteny fa tsy marina ilay adiresy nifampizaràn'ny olona  [ar].
Ohatra iray hafa amin'ny antso hanaovana fitsaram-bahoaka no nivoaka rehefa nandefa tatitra ireo mpampiasa Twitter toa an-dry @WagdyMez  [ar] sy @waelabbas  [ar] niampanga toeram-pivarotam-panafody iray izay nandà tsy hanome fanafody ny olona raha vao fantatr'izy ireo fa hoentina ho any amin'ny kianja Tahrir izy ireny, ivon'ny hetsi-panoherana.
@MariamHesham1 : Nandà tsy hivarotra fanafody amin'ireo mpangataka fiovàna ao Tahrir ny Farmasia Saif … tokony hataontsika ankivy izy io.
Na izany aza, ny mifanohitra tanteraka amin'izay  [ar] no notaterin’ ireo  [ar] mpampiasa twitter hafa :
@HebaFarooq : Nanome fanafody maimaim-poana ho anay [ho entina any] Tahrir ny Farmasia Saif .
Mitoetra foana ny fanontaniana, raha toa ka ny fitsaram-bahoaka no safidy tsara indrindra rehefa tsy mahahovoka ny rafitra napetraky ny lalàna hiarovana ny zon'ny vahoaka. Inoana fa tsy vao ny voalohany tamin'ny toy izany ireo ohatra ato anatin'ity lahatsoratra ity ; Piggipedia  (@Piggipedia ) dia zatra nanao sarintsarin'ireo mpitandro filaminan'i Hosni Mubarak izay voarohirohy tamin'ny fampijaliana sy famoretana ny tsy mitovy hevitra aminy, amin'ny famoahana ny sarin-dry zareo. Ary tena angamba, tsy mbola ho ny farany amin'ny karazana fitsaram-bahoaka misy aty Ejipta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/25/25855/
 Revolisiona ao Ejipta 2011.: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/egypt-protests-2011/
 voatifitra teo amin'ny masony: https://globalvoicesonline.org/2011/11/19/egypt-have-activists-and-journalists-been-targeted-in-tahrir-square-clearing/
 onja faharoan'ny revolisiona: https://globalvoicesonline.org/2011/11/21/egypt-the-revolution-is-back/
 lahatsary iray mampiseho manampahefan'ny polisy iray mitifitra: http://youtube.com/watch?v=54-1qNeef0E
 sary mifanosona ny mpiondana aterineto mampiseho ny endrik'ilay manampahefana: http://www.flickr.com/photos/70180851@N03/6375644823/
 nanaparitaka ihany koa taratasy kely: https://twitter.com/#!/SmithSofia/status/138870183547764736
 làlana manodidina: https://twitter.com/#!/Mozlzel/status/138944286057181184
 Bilaogy iray hafa no namoaka vaovao misimisy kokoa : http://arabanonymous.blogspot.com/2011/11/21.html
 ny laharana findainy: https://twitter.com/#!/MELGaZaLy/status/138920077264306176
 hanenjika araka ny lalàna ilay manampahefana: http://en.eohr.org/2011/11/22/eohr-filed-an-official-complaint-against-tahrir-eye-sniper/
 nifampizaràn'ny olona: https://twitter.com/#!/Neesseem/status/139356984481808384
 mifanohitra tanteraka amin'izay: https://twitter.com/#!/a_monem/status/139466572950552576
 notaterin’ ireo: https://twitter.com/#!/DrMoshira/status/139451587897720832
 famoahana ny sarin-dry zareo. : http://www.flickr.com/groups/piggipedia/